N'ogbe Blutooth e pricer labeelu smart price tag electronic labeling usoro elctronics echekwa emeputa na soplaya | Zokong
Blutooth e pricer labeelu smart price tag electronic labeling system elctronics stores
-Name: Blutooth e pricer labeelu smart price tag mkpado usoro kọmputa usoro ụlọ ọrụ elctronics
-Ọzọ Nke ozo: 1.54 ”, 2.13 ″, 2.7 ″, 2.9”, 4.2 ”, 5.8 ″, 7.5 ″ 11.6 ″, 13.3 ″
Asụsụ: Chinese, Bekee, Polish, Spanish, Russian, Japanese, Thai, Arabic, wdg.
-Oru oru ： 0 ~ 45 ℃
-Function: ngosi ngosi, Ikanam ìhè, NFC, ụlọ ahịa management wdg
Zkong's electronic shelf labeling solution (ESL) na-enyere gị aka ịchekwa oge site na mmelite ọnụego akpaka. Ọ dị ọnụ ala karịa akwụkwọ, ọ na - emekwa ka ahụmịhe ndị ahịa gị zụta ọnụego ziri ezi, ma nwee ntụkwasị obi. A na-agba ọsọ site na ngwungwu ụlọ ọrụ na-eji naanị otu nkesa, na-ejikọ Bluetooth, Wi-Fi na teknụzụ kọmpụta igwe ojii, na-enye ọnụ ọgụgụ kachasị ọnụ ala nke inwe na njikwa kachasị mgbanwe. Ọ dịghị sava dị mkpa na-ụlọ ahịa na-aghọta mfe ma rụọ ọrụ nke ọma ígwé ojii dabeere management.
Zkong ESL nwere ike igbanwe ọnụahịa na nkwalite n'otu shelf na agility, ma ọ bụ nde, ebe ọ bụla, na sekọnd. Mara na ọnụahịa gị ziri ezi, mgbe niile. ESL mekọrịta ọnụ ahịa na mmelite ozi na ụlọ ahịa. Gwa ngwa ahịa gị ka ọ kpọọ gị. Nke a ga - ebelata ụgwọ ọrụ na ọnụọgụ, bulie usoro njikwa ụlọ ahịa ma belata mkpesa nke mmejọ ọnụahịa
Enwere ike iji ESL zuru ezu mee ka ọ pụta ìhè na, yana akara ngosi Bluetooth anyị, a ga-ezigara ndị ahịa smartphones nke ndị ọzọ, nke onwe na nke na-akwụghachi ụgwọ dabere na omume ịzụ ahịa ha - site na akụkọ ihe mere eme ọchụchọ na ịzụta ndị gara aga. Ihe bụ ihe ọzọ, i nwere ike na-ekere òkè na ụdị na-akwalite ha na ngwaahịa na gị kpọọ, na-eto eto ego si shelf-n'ọnụ ga-abụ ihe agile, anya-akụta - na uru.
Zkong ESL nwekwara ike iwulite ahụmịhe nke mmekọrịta na mmekọrịta na nke ụlọ ahịa. Site na Intaneti nke Ihe (IoT) nyere ndị ESL aka, mepụta ụlọ ahịa ejikọrọ na digitize gị shelf iji mee ka akara ngosi enweghị njedebe na sekọnd, wee wuo nkeonwe, mmekọrịta na ahụmịhe.
Nwere ike ịga n'ihu mejupụta ahụmịhe arụmọrụ na ụlọ ahịa site na igosipụta data ndị ahịa na-eji akpọrọ ihe n'ịntanetị, dị ka ọnụ ahịa ndị asọmpi, ọkwa ngwaahịa na nyocha ọhaneze. Na, ị nwere ike igosi ozi ọ bụla - dịka ọnụahịa kwa kilogram, mmalite, ozi imegharị na ọtụtụ ndị ọzọ. A pụkwara ịkwalite ahụmịhe ụdị, dị ka ebe a na-esi esi nri, teknụzụ 'otu esi' eduzi na klaasị ahụ ike.
Jikwaa usoro gị site na iji ZKONG Electronic shelf Label Display Solution.
Nke gara aga: Dijitalụ Ahịa Tag E Shef Label Pricer ESL Maka marklọ Ahịa Nnukwu Superlọ Ahịa
Osote: Ikuku Retail Display Ahịa Tags Esl Label Digital shelf Talker N'ihi Low okpomọkụ
Omenala Label omenala
Digital Labels Nsukka
Ahịa Ahịa Ahịa
Kọmputa shelf shelf aha
Kọmputa shelf Label Manufacturers
Adị Edge Labels